umlawuli ku 18-06-13
Indlela i-ukuhlolwa umhwamuko permeability izikhwama zokwelapha Medical izikhwama nge ukukhanya kwayo isisindo, namandla high, ukubekwa uphawu ezinhle futhi ingcindezi nokunye, kancane kancane esikhundleni yezokwelapha glass amabhodlela, is kabanzi temlomo imithi okuqinile kanye nama-liquid isigaba imithi emaphaketheni. Wate ...
musa nuts ukugcina kanjani? Ikakhulukazi eningizimu isimo sezulu ezimanzi, isikhwama livuliwe, ukuvalwa ilula kakhulu futhi kulula kakhulu emuva igagasi, amantongomane amafutha nje banamathelane, kulokhu ukubeka nati ku ngosuku elangeni, kufanele lube sezulu esihle kakhulu, izinga lokushisa eliphezulu ...
Ukukhiqizwa irayisi izikhwama imodeli kufanele sikunake lokho?
Hlobo luni lokwaziswa okufanele zifakwe izikhwama irayisi silingane ejwayelekile kazwelonke? Ilayisi izikhwama ukuhlela amaphuzu lapho manje izwe ku yokudla efunwa kakhulu, sizokwenza ngokwemvelo ngonanzelelo. Sinolwazi kwande isembozo of irayisi cleaner izikhwama inclu ...
esiza abantulayo izenzakalo
Ukunika emuva emphakathini ngumqondo ukuthi SME eziningi ezifuywayo ziye ukunamathela. Ngomhla ka-May 15, 2018, ngaphansi kobuholi buka uMqondisi-Bureau of Commerce of Wei fang City kanye nabaholi Xiashan District Science and Technology Bureau, umqondisi ophethe i-Federation -...
Ukukhiqizwa irayisi izikhwama imodeli kufanele akhokhe ...